यी हुन् अनमोलको रोजाइका निर्देशक र नायिका « Ramailo छ
यी हुन् अनमोलको रोजाइका निर्देशक र नायिका
युवा स्टार अनमोल केसी केसीलाई आफ्नो फिल्ममा अभिनय गराउन सातामा दर्जन बढी निर्माता तथा निर्देशक उनको निवासमा पुग्ने गर्दछन् । तर अनमोल आएका सबै प्रस्ताव स्विकार गर्दैनन् । छानेर वर्षमा एकमात्र फिल्ममा उनले अभिनय गर्दै आइरहेका छन् । खासमा अनमोल कुन निर्देशकसँग काम गर्न चाहान्छन् ? अनमोलको अबको रोजाइकी नायिका को हुन् ? हेर्नुस् यो भिडियो :
‘कृ’ एक्टर केसीको रोजाइमा निर्देशक सुदर्शन थापा पर्न आएका छन् । निर्देशक निश्चल बस्नेत, सुदर्शन थापा र दिपाश्री निरौला मध्ये तपाईं कुन निर्देशकसँग काम गर्न चाहानु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अनमोलले सुदर्शन रोजेका हुन् । यस्तै नायिकातर्फ स्वस्तिमा खड्कालाई रोजेका छन् । पूजा शर्मा, स्वस्तिमा र दीपिका प्रसाईं मध्ये उनले स्वस्तिमालाई रोजेका हुन् ।
अनमोल अभिनित फिल्म ‘कृ’ यही माघ २६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । अनमोलसँग नव नायिका अदीति बुढाथोकी प्रस्तुत भएकी छन् । सुवास गिरी र भुवन केसी निर्मित फिल्मलाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् ।